हाम्रोगाईघाट . ब्लगस्पोट . कम: उसिउलीमा ठूलो परिणाममा फर्मेस तेलमा मिसावट
6:16 AM भुवन राउत
उदयपुर, असार १३ गते । उदयपुर सिमेन्ट उधोग (लिमिटेड) जलजलेमा किलमा आगो बाल्न प्रयोग गरिने फर्मेश तेलमा ठूलो परिणाममा मिसावट भएको पाइएको छ ।
भारतको हर्दियाबाट बाट ना ४ ख ३४३९ नम्बरको ट्यांकरमा ल्याईएको एक ट्यांकर (२० हजार लिटर) तेलमा मिसावट पाईएको भण्डार विभागका सहायक खरिदार चुडामणी पोखरेलले बताउनुभयो । पोखरेलले कर्मचारी प्रतिनिधिहरुको रोहबरमा सोमबार विहान परिक्षण गर्दा १५ लिटर तेलमा २ लिटर तेल १३ लीटर पानी फेला परेको बताउनुभयो । “यो अत्यन्तै ठूलो परिणामको मिसावट हो ।” उधोगका मजदुर नेता राधे कोइरालाले भन्नुभयो । “तेल परिक्षण नगरी भण्डारमा खन्याउन लागिएको थियो तर, परिक्षण गर्दा ठूलो परिणाममा मिसावट भएको पाईयो ।” वहाले भन्नुभयो । नेपाल आयल निगम विराटनगरमा समेत चेकजाँच गरी ल्याईएको तेल १५ लिटरको बाल्टीमा तिनपटकसम्म भरेर चेक गर्दा पनि उहि परिणाम भेटिएको वहाले बताउनुभयो ।
मिसावट भएको तेलसहितको ट्यांकरलाई मजदुरहरुले नियन्त्रणमा लिई प्रहरीलाई बुझाएको छ । आवश्यक छानविन तथा कारवाहीको लागि ट्यांकर इलाका प्रहरी कार्यालय जलजलेमा राखिएको छ । प्रहरीले ट्यांकरका चालक टेकबहादुर गिरी, सहचालक काजी पौडेल र तेल किन्नका लागि उद्योगबाट खटिएका भण्डार प्रतिनिधि अधिकृत छैठौ तहका हेमकुमार दाहाल, क्लिङ्कर प्रतिनिधि मेकानिक्स चौथो तहका ब्रम्हप्रसाद गुप्ता र खरिद प्रतिनिधि बरिष्ठ सहायक पाँचौ तहका सरोजकुमार थापालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
उधोगले आवश्यक छानविनको लागि इप्रका जलजलेलाई आधिकारिकरुपमा पत्रसमेत लेखिसकेको जनाएको छ । नेपाल आयल निगम विराटनगरलाई पनि बोधार्थ पठाईसकेको छ ।
उधोगमा विविध सामान खरिदको क्रममा देखिने भ्रष्टचार, मिसावटको घटना यस किसिमले दोहोरिनु कुनै नौलो नभएको मजदुरहरुले बताएका छन् । स्थानीय प्रशासनले उद्योगको सुधारमा ध्यान नदिदा उद्योग प्रशासनको लापरवाहीले यस्ता घटना दोहोरिरहने गरेको उनीहरुको भनाई छ । बेलाबेलामा हुने यस्ता घटनामा उद्योग प्रशासन तथा विभिन्न विभागिय अधिकृतहरुको मिलेमतो हुने गरेको आरोप मजदुर नेताहरुको छ
उधोगका निमिक्त महाप्रवन्धक महेश काप्mलेले इण्डियाको हर्दियाबाट ल्याएको उक्त फर्मेश तेल उतै मिसिएको हुनसक्ने बताउनुभयो । आवश्यक कारवाहीको लागि प्रहरीलाई जिम्मा लिइएको वहाले बताउनुभयो ।
यसअघि उधोगमा फर्मेश तेलमा मिसावटका कारण करिब २५ सय किल तेल सर्टेज भएको मजदुर नेता राधे कोइरालाले बताउनुभयो ।
समाचार - भोटराज राई
1 Response to "उसिउलीमा ठूलो परिणाममा फर्मेस तेलमा मिसावट"
Many people opt for sneakers or loafers when wearing shoe lifts insoles to make sure nobody can tell they are using the orthopedic device